जितु नेपाल ४३ वर्ष पुग्दा कसले के लेखे ? « Ramailo छ
जितु नेपाल ४३ वर्ष पुग्दा कसले के लेखे ?
समय : 1:34 pm
चर्चित हाँस्य व्यांग्य कलाकार जितु नेपाल ४३ वर्ष लागेका छन् । जेठ १ गते जन्मिएका जितु विशेषतः ‘जिरे खुर्सानी’को मुन्द्रे क्यारेक्टरले दर्शकमाझ चर्चित छन् ।
‘छक्का पञ्जा’ सिरिजका कलाकार तथा निर्माता नेपाल देश तथा विदेशमा आयोजना हुने स्टेज शोमा पनि उत्तिकै व्यस्त हुने गर्दछन् । स्ट्यान्डअप कमेडीमा जितु माहिर मानिन्छन् । यिनै भर्सटायल व्यक्तिलाई जन्मदिनमा नेपाली फिल्मका थुप्रै व्यक्तिले शुभकामना दिएका छन् । जितुको जन्मदिनका कसले के लेखे त ?
निर्देशक तथा निर्माता दिपाश्री निरौला लेख्छिन्, ‘मेरो लाला जन्मदिन को शुभकामना !’
दीपकराज गिरी : प्रिय मित्र जीतू नेपाल जन्मदिनको लाखौ शुभकामना हाम्रो मित्रता र सहकार्य निक्कै पूरानो भएको यो फोटोले पनि बताउँ छ । तपाइले प्राप्त गरेको यो सफलता उदाहरणिय छ भबिष्यमा अझ धेरै प्रगति र उन्नतिको कामना गर्दछु ।
केदार घिमिरे, माग्ने बुढा : नेपाली हाककस्य जगतका हस्ती,बौद्धिक ब्यक्तित्व, सबैका प्यारा, सरल मिजासका, जितु दादा, मेरो लाला लाई जन्मदिनको लाखौ शुभकामना ।
सिताराम कट्टेल, धुर्मुस : गर्व गर्न लायक मेरा गुरु । आदरणीय जितु नेपाल दाजुको लागि आजको दिन जति विशेष छ । उहाँको जन्म मेरो लागि पनि उत्तिकै विशेष छ । कलाकार बन्ने सपना साकार बनाउन सहयोग गर्नु हुने मेरो जिवनका शिल्पकार, बहुप्रतिभाशाली, सिर्जनशील करोडौं दर्शकको मनमा बस्न सफल जितु दाजुलाई जन्म दिनको शुभकामना ।